Resaka manodidina ny zon'ny ankizy - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Ny ankizy koa dia samy manana ny fiheverany sy fandraisany azy. Ary samy manizingizina ny azy ho marina avokoa ny rehetra. Raha zohina anefa ny resaka mandeha etsy sy eroa dia misy toa mifanohitra sy mifanipaka ny hevitra avoakan'izy ireo. Misy indray mitovitovy ihany.
Eny amin'ny fiarahamonina misy antsika eny dia re hatrany izany ary resaka mandeha foana. Na any amin'ny televiziaona na amina an'onjam-peo sy gazety ary indrindra resaky ny mpiara-belona sy mpiray vodirindrina eny.
Maro ireo zon'ny ankizy ka indreto misy ZO izay zary adihevitra sy ifanoherana eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina malagasy taloha.
- Voalaza fa zon'ny ankizy ny misafidy izay finoana tiany harahina. Saingy raha ampitahaina amin'ny fiarahamonina malagasy fahiny izany dia hita fa mifanipaka amin'ny fitaizana ankehitriny. Amin'izy ireo dia ny finoan'ny Razam-be taloha no tokony harahina sy ankatoavina ka tsy tokony ho zimbazimbaina. Ary ny taranany aty aoriana dia tsy maintsy manaraka izany avokoa ka zary lasa fiteny aty aoriana ilay hoe ''fiangonan-drazana''. Ankehitriny anefa dia tsy toy izany fa malalaka ny ankizy hisafidy izay antoko-pinoana tiany sy mety aminy na inona na inona izany. Ka tsy azo terena izy fa tokony harahina ny safidiny. Indraindray dia lasa ny ray aman-dreny no baikoin'ireo zanany. Toa tsy misy intsony ny hasin'izy ireo anaovan'ireo ankizy sasany azy.
- Manaraka izany dia lazaina fa manan-jo haneho hevitra ny ankizy ka tsy tokony ho tampenam-bava. Na inona na inona lazainy. Kanefa misy ireo ankizy manararaotra izany mba hanoherana ny raiamandreny. Lazainy avokoa izay tiany holazaina ary misy mihitsy aza sahy manohitra ny ray na reniny. Ka zary hararaotin'ny ankizy sasany izany. Lazainy fa manao didy jadona ireo ray aman-dreny raha toa ka mandrara sy miteny azy ireo. Lasa ny ankizy no lehibe mibaiko ny ray aman-dreniny.
Nitondra soa ho antsika malagasy ve ny fametrahana ny zo raha toy izany ny zava-misy ?
Mipetraka ny fanontaniana.
Amin'ny lafiny iray dia tsara ny nametrahana ny zon'ny ankizy. Ankilany, lalàna miaro ny ankizy amin'ny herisetra mianjady aminy ary io ihany koa no porofo manambara fa tsy mitsaha-mivoatra ny fiainan-janak'olombelona eto an-tany. Ary mahatsapa ny rehetra fa sarobidy ny zanaka ka mila arovana ny zony sy hasiny. Raha eo amin'ny fanabeazana dia izy ireo no lazainy fa ''ho avin'ny firenena'' ka mila omena azy ny fahafahany. Etsy andaniny anefa dia hita sy tsapa fa nitondra rivotra ratsy ho an'ny ankizy malagasy ity fitakiana ny zon'ny ankizy ity. Mieritreritra izy fa eo amin'ny lafin'ny fiainana rehetra dia azony atao ny mitaky ny zony ary azo ampiharina eo amin'ny fiainana rehetra. Zary lasa manao ny tsy fanao ny ankamaroan'ny ankizy sasany fa hoe : ZONY IZANY ary tsy azo hosena. Lasa toa zary fanararaotana mihitsy, indrindra moa fa lasa fanaovana tsinontsinona ray aman-dreny izany indraindray.
Ahoana kosa ny ray aman-dreny manoloana izany ?
Lasa mifanolana foana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Raha vao raràna tsy hanao ny tiany izy dia midrikina fa hoe manosy ny zony ka lasa mieritreritra ny ray aman-dreny sasany fa ratsy ny nanisiana ny zon'ny ankizy. Misy kosa ny olona sasany minia tonga dia tsy miraharaha izany ZON'NY ANKIZY izany fa mandika sy manitsakitsaka tsy miraharaha akory na misy izany na tsia. Manao tery vay manta ireo zanany hanao zavatra tsy tokony hatao ka raha vao mandà dia rahonana sy ampitahorina. Misy kosa ireo ray aman-dreny ka mamela malalaka ireo zanany hanao izay tiany ka tsy miteny izay ataony na mety na tsia izany ka malalaka ny ankizy amin'izay tiany rehetra. Izay no fandraisany ny hoe zon'ny ankizy.
Manaporofo ireo fa samy manana ny heviny izy ireo mikasika ny Zon'ny ankizy. Kanefa ny azo lazaina aloha hatreto dia maka hevitra hafa ny olona fa tsy araka ny tokony ho izy, arak'izay hevitra tiany havoaka no anohanany ny heviny amin'izay zo mety hifanaraka aminy. Ary na ny fametrahana na tsia io zo io dia azo lazaina fa samy manana ny fomba hametrahany sy hitondrany ny zanany ny tsirairay, samy manana ny fomba fitaizana ny rehetra ary samy manana ny sainy avokoa na ny zaza, ankizy, tanora ary ny lehibe ihany koa.
Ary aminao ahoana ny fandraisanao izany zon'ny ankizy izany, tsara sa ratsy, mety sa tsy mety ny hametrahana azy ho laharam-pahamehana eo amin'ny fiarahamonina ? Tohizo ny ady hevitra eo aminareo samy ianareo.